अर्पणको अचम्मको स्मरणशक्ति, २५ वर्षमै विश्वकीर्तिमानी | Hamro Okhaldhunga
हेलो ओखलढुंगा | महत्त्वपूर्ण सम्पर्क नम्बर
बर्षा र बाढीका कारण तिन जिल्लामा नाकाबन्दी
बाढीपहिरोमा मृत्यु हुनेको संख्या ५ पुग्यो
मानेभञ्जाङमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना, ३ को मृत्यु
ओखलढुंगामा विपी स्मृति भवन निर्माण सुरु
जन्मदिनमा बिपन्नलाई टिनको छानो
कुक र सिलाइकटाइ तालिम सुरू
प्रगति र उपलब्धिबारे समीक्षा
खिजीदेम्बा गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम
अर्पणको अचम्मको स्मरणशक्ति, २५ वर्षमै विश्वकीर्तिमानी
प्रकाशित मिति: २४ बैशाख, २०७४
ओखलढुंगा । एकपटक हेरेकै भरमा कुनैपनि वस्तुको लामो सूचि भन्न सक्छन् झापाका अर्पण शर्माले । उनले यही खुबीका गिनिज बुक अफ द वल्र्ड रेकर्ड्समा आफ्नो नाम लेखाइसकेका छन् ।
यसअघि भारतको हैदरावादका जयसिंह रविरालाको नाममा यो कीर्तिमान रेकर्ड गरिएको थियो । उनले एक मिनेटमा ४० वटा वस्तुको नाम स्मरण गरेका थिए । उनले एक मिनेटमा ४२ वटा वस्तु चिनेर कीर्तिमान कायम गरेका हुन् । सन् २०१४ सेप्टेम्बर २६ तारिखमा उनले यो रेकर्ड बनाएका थिए ।
अहिले २७ वर्ष लागेका अर्पण पछिल्ला दिनहरुमा पूर्वी नेपालका विभिन्न विद्यालय र संघसंस्थामा स्मरणशक्ति अभिवृद्धि सम्बन्धी तालिम दिनमा व्यस्त छन् ।
अघिल्लो बैशाखमा उनले झापामा युवा सशक्तिकरण समाज नामक संस्था खोलेका छन् । सो संस्थाले युवालाई मेमोरी, आर्ट, बुटिक लगायतका विषयसँग सम्बन्धित तालिम दिन्छ ।
तासको पत्तीहरु सबैलाई बाँडेर उनी कसको हातमा कुन छ, भन्दिन सक्छन् । मानिसको भीडमा गएर एक पटक सबैलाई नाम सोध्छन् पहिलो पटक सुनेका ती नामहरु नझुक्किई भन्न सक्छन् ।
सुमधुर आवाजका धनी उनी विभिन्न सभा, समारोहमा गीत पनि गाउँछन् । बहुप्रतिभाशाली अर्पण राष्ट्रिय युवा पुरस्कार–०७२ बाट सम्मानित भइसकेका छन् । यसका साथै स्थानीय स्तरमा पनि दजनौं संघसंस्थाबाट पुरस्कृत भएका छन् ।
बीबीएस दोस्रो वर्षको परीक्षाको बेला साथीहरुले अर्पणमा अद्भूत प्रतिभा देखेपछि गिनिज बुकमा नाम लेखाउन जोड गरेका थिए । परीक्षा नजिकिँदै गर्दा छिमेकको साथी प्रकाश गिरीसँग बसेर उनी तयारी गर्दै थिए ।
प्रकाशले केही शब्दहरु लेखेर दिँदै कसले छिटो याद गर्ने भनेर अर्पणलाई च्यालेन्ज दिए । अर्पणले स्वीकार गरे । प्रकाशलाई ती शब्दहरु याद गर्न करिब २० देखि २५ मिनेट लाग्यो । तर, अर्पणले दुई मिनेटमै ती शब्द याद गरे । प्रकाश छक्क परे ।
उनको विलक्षण प्रतिभा देखेर साथीले नै यो विधामा विश्व कीर्तिमान राख्न सकिने बताए । लगत्तै उनीहरुले इन्टरनेटमा हेर्दा त्यसबेला एक मिनेटमा २२ वटा वस्तुको स्मरण गरेर रेकर्ड कायम गरिएको रहेछ ।
गिनिज बुकको वेबसाइटबाट उनले अनलाइन एप्लिकेशनको बारेमा थाहा पाए । केही दिन पूर्व तयारीका लागि छुट्टयाए ।
पछि अनलाइनबाटै फारम भरे । शीर्षक थियो, Longest Sequence of objects memorized in one minute’
त्यहाँ नियमहरुको बारेमा पनि लेखिएको थियो । कीर्तिमान देखाउने इभेन्टको समय र ठेगाना सोधिँदो रहेछ । उनले तीन महिनाको समय राखे । दमकको पाथिभरा होटल एण्ड लजमा इभेन्ट गरियो ।
धेरै शब्दको केहीबेरमै स्मरण गरेर उनले सबैलाई चकित बनाउने गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘सामान्यतयाः एउटा शब्दलाई स्मरण गर्न एक सेकेण्डदेखि ५ सेकेण्डसम्म लाग्छ ।’ आफ्नो स्मरणशक्तिका कारण उनलाई पढाइमा पनि धेरै सघाउ पुगेको छ । उनी कलेज टपर हुन् । अचम्म लाग्न सक्छ, परीक्षाको तालिका नआउन्जेल उनी किताबै छुँदैनन् । तर, तालिका आएको एक महिनाअघिदेखि भने आफ्नो स्मरणशक्तिलाई भरपूर प्रयोग गर्दै मन लगाएर पढ्छन् ।
पढेका कुरा कसरी याद गर्ने त ?
उनले भने, ‘हरेक शब्दहरुलाई चित्रमा कोर्न सक्नुपर्छ, सबै कुरालाई चित्रमा कन्भर्ट गर्दा याद गर्न सजिलो हुन्छ ।’
अर्पणले कलेज जीवनमा कमै मात्र कलेज धाए । उनी सम्झिन्छन्, ‘कक्षा ११\_१२ मा वर्षभरिमा १० देखि १५ दिन मात्र कलेज गएँ होला । १२ पछि त एक दिन पनि क्लास लिइनँ ।’ उनले ०६२ सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेका हुन् ।
उनी चेसको पनि राम्रो खेलाडी हुन् । तर, उनीसँग प्रायः साथीहरु खेल्न मान्दैनन् । हाँस्दै उनले भने, ‘उनीहरुलाई आफू हार्छु भन्ने थाहा हुन्छ, त्यसैले खेल्दैनन् ।’ वास्तवमै उनलाई चेसमा हराउन सक्ने साथीहरु कमै छन् ।
अर्पणलाई कोर्सका किताबभन्दा पनि बाह्य किताब रुचिकर लाग्छन् । उनी वैज्ञानिक तथ्य, योग, ध्यान र प्रेरणादायी पुस्तकहरु पढ्न मन पराउँछन् । उनी प्रायः दिउँसोको समयमा पढ्छन् ।
अर्पणलाई दर्जनौं फोन नम्बरहरु पनि कण्ठस्त छन् । उनलाई देखेको सबै कुरा याद हुने हो त ? उनी भन्छन्, ‘त्यस्तो होइन । याद गर्छु भनेर स्मरण गरेको कुरा मात्र याद हुने हो ।’
विश्व कीर्तिमान कायम गर्नुभन्दा अघि र पछिको आफूमा उनी धेरै फरक पाउँछन् । ‘पहिले प्रतिभा र क्षमता थियो, देखाउने कन्फिडेन्स थिएन । अहिले कन्फिडेन्स लेभल बढेको छ, प्रतिभा देखाउने प्लेटफर्म पनि बढेका छन् । जहाँ गएर जे पनि गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ ।’
उनले पछिल्लो समय तास सम्बन्धी अर्को कीर्तिमान कायम गर्ने सोच बनाएका छन् । पानीमा डुबेर तासको रेकर्ड राख्ने र गीत गाउँदै याद गर्ने विधामा आवेदन भर्ने उनको तयारी छ ।
गिनिज बुकबाट आधिकारिक मान्छेलाई बोलाएर कार्यक्रम गर्दा ६ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ । यहाँबाट भिडियो बनाएर पठाउँदा १० देखि ११ महिनासम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरु नेपाल आउने वातावरण भयो भने कार्यक्रम सकिने बित्तिकै प्रमाणपत्र पाउन सकिन्छ ।
स्मरणशक्ति अन्तर्गतको ५/६ वटा विधामा रेकर्ड कायम गरेर नेपालको नाम विश्वमा फैलाउने उनको लक्ष्य छ । यसका साथै गायनलाई समेत व्यावसायिक रूपमा अघि बढाउने उनको योजना छ ।
विभिन्न अनलाइनको सहयोगमा
वियर बनाउन मान्छेको पिसाब संकलन !
डोफेन सम्पा छोलिङ गुम्बामा बुद्ध जयन्ती
नवराज कार्की हाम्रोओखलढुंगाडटकमका सम्पादक हुन् । उनले ओखलढुंगा, धनकुटा र इटहरी कार्यक्षेत्र बनाएर ११ बर्ष पत्रकारिता अनुभव सँगालिसकेका छन् ।
ओखलढुंगामा ८ वटा खुट्टा भएको बाख्राको पाठो
०९ बैशाख, २०७६
ओखलढुंगामा पनि हिलोसहितको वर्षा
०३ असार, २०७५
ओखलढुंगामा खिचिएका यस्ता अदभूत तस्बिर, जुन देखेर तपाईँले भन्नुहुन्छ बाह !
०१ मङि्सर, २०७४
२४ बैशाख, २०७४
रगनीका लाभग्राहीबाट पैसा असुल्दै प्राविधिक
उम्मेदवार टुंगाउन नसक्दा ओखलढुंगा कांग्रेसले केन्द्र गुहार्‍यो
ओखलढुंगाको लोपोन्मुख लहरी भाका एल्बममा, सन्दिपले ल्याए ‘जोर मादलको जुइना’
देवीले ल्याए ‘सुसेली मोलुङ खोलाको’
पूर्वाधार पूरा नहुँदा पोकली झरना ओझेलमा
प्राचीन महत्वका पाटीपौवा हराउँदै
नदी र खोला आसपासमा खानेपानी समस्या
पहिरो झर्ने गाउँमा भुकम्पपीडित
तत्कालीन पोकली गाविस भवन अलपत्र
ओखलढुंगा मिडिया प्रा.लि. द्वारा संचालित
सूचना विभाग दर्ता न‌ं. १२९/२०७३-७४
सिद्धिचरण नगरपालिका- ११, ओखलढुंगा
फोन: ०३७-०००००० । मोबाइल : ९८४२४८३०३५
श्याम राई (९८४३७६२७५९)
इन्द्र घिसिङ (खिजिदेम्बा गाउँपालिका)